လှကျော်ဇော ● မမခင်ဆွေဦးသို့ ဂါရဝ … – MoeMaKa Burmese News & Media
“တနေ့အသက်၂၄ နှစ်ခန့် အသားညိုညိုအရပ်ရှည်ရှည်လူရွယ်တယောက် သူနှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံပါသည်။ စစ်အတွင်း အသက်မသေ တွေ့ရသဖြင့် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းများနှင့်တကွ ကျမရော ကလေးတွေပါ… ဖော်ရွေစွာ ပြောဆိုနေပါသည်။ သူ့ခါးတွင် နွမ်းပေ့ဆိုသည့် ပိုးလုံချည် အပေါက်အပြဲနှင့် စွပ်ကျယ်ဝတ်ဆင်ထားရာ လူရွယ်စိတ်ကောင်းပုံမရပါ။
သို့ရာတွင်….ဟန်မပျက် ၂နာရီကျော်ကျော် သူ့အကြောင်းစစ်အကြောင်း. နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောဆိုကြပြီး ပြန်သွားပါသည်။
“ဟေ့ဒီမယ် … ငါ့နှယ်နော် စိတ်မကောင်းလိုက်တာ” တဲ့။ မညည်းစဖူး ညည်းပြီး ပြောလိုက်ပါသည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဂျပန်ပြည် စွန့်စွန့်စားစားသွားခဲ့တယ်။ ပြန်လာတော့ စစ်ပွဲအမျိုးမျိုးနွှဲခဲ့တယ်။ သူ့ကို ငါကသာကူညီရမယ်မဟုတ်လားနှင့် ချီတုံ ချတုံ ဖြစ်နေပါသည်။ စာကလေးတိုတိုပင်ဖြစ်သည်။ စာရှင်မှာ လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က သူ ပုဆိုးနွမ်းနှင့် စကားပြော ဧည့်ခံလွှတ်လိုက်သော သူ့တူချစ်ဆီက ဖြစ်သည်။ စာထဲမှာတော့ “ဦးလို ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဆင်းရဲနေတာကို ကျွန်တော် မကြည့် ရက်နိုင်၍ ငွေတထောင်အပို့ခိုင်းလိုက်ပါသည်။” ဤမျှသာ။ သူ ငွေတထောင်ကို လက်မှတ်ထိုးယူလိုက်သော်လည်း တော် တော်နှင့် မသုံးသေး။ ထိုလူရွယ်မှာ မြန်မာစစ်ဗိုလ်မေဂျာဖြစ်၍ သူ့တွင် ငွေပိုရှိ၍မဟုတ်။ လခထဲမှ တလတရာ အဖြတ်ခံပြီး ပေးပို့ခြင်းဖြစ်၍လည်း ကျမတို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ရသည်။ ၁၉၄၃ -ခု မတ်လ ၂၁ ရက် ကျမ သေသေချာချာ မှတ်ထားလိုက်သည်။ သူ့အဖို့မှာလည်း တူလိုသားလိုချစ်သူ၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တကယ့်စေတနာသိရတော့ မျက်ရေကျလာသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ထိုအချိန်က ဂျပန်ငွေ ၁ဝဝဝိ သည် အင်္ဂလိပ်ငွေ ၁ဝဝဝိ ထက် တန်ဘိုးရှိပါသေးသည်။ ထိုငွေကြောင့်လည်း ကျမ တို့ တနှစ်ခွဲလောက် အသက်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုထောက်ပံ့ဖူးသူကား အခြားမဟုတ်။ ယခု အင်းစိန်နယ်တဝိုက် စွန့်စွန့်စားစား ရှေ့ ဖျားကနေ၍ စစ်ဗျူဟာခင်းနေသော တပ်မင်းကြီး ဗိုလ်ကျော်ဇောဖြစ်ပါသည်။
← ကာတွန်း ဘီရုမာရဲ့ အရုပ်ကြီးပါတော် !
ဇင်လင်း ● NLD အစိုးရ ဖေါက်ထွက်ရမည့် နိုင်ငံရေးနွံအိုင်ကြီးများ →
ကိုသန်းလွင် ရသဆောင်းပါးစုံ အာရှတလွှား
ကိုသန်းလွင် – အိမ်ပြန်ချိန်
August 12, 2018 Aung Htet